Ama-oda kubasebenzi njengoba ukhiye umthombo document amabhizinisi yesimanje. Uyini ngokucacile sokulungiselela yabo? Ungabheka kanjani le mibhalo?
Yiziphi oda kubasebenzi?
umthetho Russian elawula HR Outsourcing kuhilela ukusetshenziswa njalo amabhizinisi yeziqondiso ezahlukene zendawo. Phakathi kwalabo - Ama-oda. Ukuze uhlukanise wabayisa izinhlobo ezimbili eziyinhloko. okungukuthi:
phezu oda ezihlobene ibhizinisi core;
phezu oda ekhishwe ngenjongo ukulawula isakhiwo yakho yebhizinisi.
Kulokhu kuba isenzo wezomthetho uhlobo lwesibili.
Oda kubasebenzi - uhlobo imibhalo yokuphatha ibhizinisi. Le mithombo zinyatheliswa inkampani ngenjongo yokubhalisa kwezomthetho:
Abasebenzi ukuhambisa ukusuka esikhundleni eyodwa kuya kwenye;
Ama-oda ebhekiswe kwabasebenzi okuthile noma iqembu wonkana;
Lezi zinhloso kusikisela ukuthi ngokuqinile izokhipha izinhlobo ezifanele abasebenzi oda. Yini abangayenza kube?
Ngokwesibonelo, kukhona imiyalo:
ukuqokwa kwamalungu, ukuxoshwa kwabo esikhundleni;
umklomelo, ukuthuthukiswa kwabasebenzi;
ukuhamba umsebenzi kwenye indawo.
Ukungeza kanye nokubuyekeza imininingwane, ebhaliwe trudknizhkah zokusebenza kanye namanye amarekhodi imibhalo ezimweni eziningi kusekelwe oda embuzweni.
Ama-oda imisebenzi Ifomu yokusebenza
amabhizinisi Russian kabanzi oda zifane kubasebenzi - esekelwe ifomu avunyiwe imithombo ehlukahlukene komthetho. Chief phakathi kwabo - inombolo Ukulungiswa uMbuso Izibalo iKomiti 1, esanyatheliswa yiHhovisi Januwari 5, 2004. Lokhu okulandelayo izinhlobo eziyisisekelo oda kubasebenzi ukuthi akhonjwe amalungiselelo afanele:
yokwemukelwa izisebenzi (yenziwa ngesisekelo ifomu esinobunye T-1 noma ye-T-1a, owokuqala - siqu yesibili - sifinyeto);
ukudluliselwa kwabasebenzi (Ifomu T-5, T-5a);
ukukhululwa kwe umsebenzi ikhefu (imibhalo T-6, T6a);
ekunqanyulweni yesivumelwano (Ifomu T-8, T-8a);
ekuthumeleni onguchwepheshe (imibhalo T 9 T 9a);
phezu ukukhuthazwa umsebenzi (ifomu T11, T11-a).
Kumele kuqashelwe ukuthi le dokhumenti izinkampani ukuphathwa zingasebenzisa ezabo izinhlobo oda, ngaphandle kunqatshelwe ngokomthetho. Kungenzeka futhi uma kwenzeka ukuthi isibonelo ngokukhethekile komyalelo wokungabi izisebenzi akakuvumeli umthetho ngesimo ngesakhiwo okwakha.
Uma ngokuqinile idokhumenti ethile ngokwakho - kutuswa ukusebenzisa nezinhlinzeko isimo ekhethekile ejwayelekile GOST 6.30-2003. Kungase ibukeke umyalelo esihlanganisiwe kubasebenzi? Isibonelo le dokhumenti - esithombeni ngezansi.
Kulokhu kubhekwe isampula ukuze umsebenzi kwifomu zifane № T-1.
ezisetshenziswa kakhulu amafomu zifane oda e izinhlangano kwesabelomali futhi bezinhlangano eziphethwe uhulumeni. Ezimweni eziningi, lokhu kungenxa yokuba khona imithombo evunyiwe yomnyango amasampuli.
Ngakwelinye ihlangothi, izinkampani ezizimele ngokuvamile isicelo oda bebodwa amafomu. Kodwa njengoba umthetho, kuphela lokhu ikakhulukazi ezimweni lapho ikhambi izinkinga service izisebenzi ayigunyazelwanga idokhumenti enobunye. Uma ikhona, kukhona kwegazi, ngokuvamile izinkampani ungachithi isikhathi ukudala amafomu amasha, okuyizinto, eqinisweni, ngeke okubili iyunifomu. Yikuphi nazo libhekene degree kuqhathaniswa eliphezulu lula, mayelana netakhiwo.
Kungase ibukeke amasampula kwabasebenzi oda yakhelwe wedwa? Isibonelo omunye wabo - ku isithombe esilandelako encwadini yeenthombe.
Kulokhu, isampuli kubhekwa umyalo ekuvunyweni isheduli iholide. Ubizwa ngokuvamile amelwe isakhiwo kahle elula.
Qaphela ukuthi amabhizinisi ngokuvamile asinasizathu ethile esikhundleni amafomu zifane intracorporate amasampula - ngaphandle uma niqinile akuyona ihlelwe nezakhiwo ukukhiqizwa eziyinkimbinkimbi kakhulu ezidinga ukusungulwa ahlukene ezimali izindlela. Noma, uma isakhiwo sabo ulula - esimweni isheduli iholide.
Kungaphawulwa ukuthi kukhona eziningi nendlela ngezigaba oda embuzweni. Phakathi kwalabo - isakhiwo dokhumenti. Cabangela izici zayo ngokuningiliziwe.
Ama-oda Sakhiwo: imibhalo elula eziyinkimbinkimbi
Ngakho, umbandela ebaluleke kakhulu ngezigaba oda kubhekwa - isakhiwo. Ngokuhambisana imibhalo zihlukaniswe main ezimbili izinhlobo - elula eziyinkimbinkimbi.
Ama-oda uhlobo 1 libhekene iyunithi zokuphatha 1 (amagama "ukwamukela", "uchithe", "ukudlulisa", njalo njalo. D.). Uma, ukwenza isibonelo, i-oda ukuqoka omunye uchwepheshe, it kuzoxoxwa njengoba umuntu, uma komthetho - a abasebenzi ezimbalwa, izobizwa idokhumenti isifinyezo.
Uma umthombo amayunithi eziningana zokuphatha, it kuzoxoxwa eziyinkimbinkimbi. Bona ivamile impela, kodwa ukusetshenziswa kwabo ubhekwa kakhulu inqubo isikhathi, ngisho nokusetshenziswa izixazululo zanamuhla lobuchwepheshe, ngoba kulesi simo kungase kudingeke maqondana esiningi idatha, okuyinto zitholakala ezigabeni ezahlukene kokufaneleka.
Manje vula ekutadisheni ezingxenyeni ezahlukahlukene zesimiso isakhiwo dokhumenti, okungabandakanya oda kwinhlangano.
Imisuka isakhiwo oda kubasebenzi
I element eyinhloko oda - sigaba. It siqukethe le izinto. Kufanele kufakwe oda ngesisekelo idokhumende ethize. Kulokhu, kubalulekile ukuhlinzeka isixhumanisi. Uma uzilungiselele, isibonelo, i-oda umuntu oqokelwe yiliphi ihhovisi, izinto ezifanele kungafakwa idokhumenti ngesisekelo:
isitatimende siqu umsebenzi;
umphathi amanothi ngubani zaxoxa umsebenzi noma unqume ukuba imnike ngezisekelo ezihlukile;
Kunconywa ukuba angene oda igama elithi "isizinda" ngemva - abonisa isixhumanisi idokhumenti ezithile. Kulesi umthombo kumele iboniswe iqiniso lokuthi umuntu oqokelwe lokhu noma lokhuya isikhundla, uyazi zoMthetho oda. Kulokhu, udinga ukufaka kule dokhumenti ethi "oda ajwayelekile", ngemva kwalokho isisebenzi, oye wacwaninga umthombo efanele, ubeka nesignesha kasomabhizinisi futhi ukhombise usuku.
Ama-oda - ikakhulukazi, uma HR Outsourcing kwenziwa, futhi, ukuze sibonakalise ukuqokwa kwabasebenzi kule post, udinga ukunikeza indlela amagama abekwe ngayo ngokomthetho olufanele. Ngokwesibonelo, ehambisana ne-term isivumelwano umsebenzi, ubukhulu nomholo wakhe, ishifu yakhe yomsebenzi.
Ngakho, isakhiwo ejwayelekile ye-oda on the izisebenzi kudinga khona kulethe block:
isimo isenzo ukuphathwa le nkampani;
Igama eligcwele kanye neminye imininingwane mayelana umsebenzi;
usuku okwaqala ngalo amandla kwento idokhumenti;
Okunye ulimi ebalulekile oda.
Izinsimbi zomculo kungaba kuzosungulwa zokusebenza ezahlukene. Abakwazi idluliselwe anhlobonhlobo. Ngakho, e-Izijobelelo oda we izisebenzi kungenziwa kubonakala uhlu abasebenzi izikhundla engaphansi kwe idokhumenti efanele. I isijobelelo oda kungenziwa idatha fixed, okuyinto kuyinkinga ukubonakalisa ngco embhalweni - ngokwesibonelo, kungaba ihluzo, izithombe, amashadi, kudingekile ukucacisa okuqukethwe umbhalo idokhumenti.
Ukulungiselela oda: yini okumelwe siyibheke?
Yini kufanele sinake ekhethekile umklamo kwezinsimbi zomculo?
Okokuqala, ngokusho kongoti, ukubunjwa oda kubasebenzi akufanele kube usebenzisa izifinyezo. Le nkulumo okufanele kufakwe idokhumenti ngaphandle ukusikeka.
Ngakusasa umbandela ebaluleke kakhulu ukubulawa efanele imibhalo efanele - ukuntula kwabo ulwazi mayelana nemithombo izinkathi ezahlukene isitoreji. Ngokwesibonelo, ehlangene namaholide futhi ibhizinisi oda uhambo abasebenzi igcinwe ngokuhambisana namazinga sisebenza iminyaka engu-3. Imibhalo, okubonisa ulwazi umsebenzi umsebenzi kufanele igcinwe archive inkampani engu-75.
Ngakho, kuzo zonke oda imithombo ngedatha eshalofini yokuphila efanayo kufanele ibonakale.
Kuyasiza cabanga amazinga ayisisekelo ukushicilelwa imibhalo embuzweni.
Izigaba zezincwadi-oda abasebenzi
Okokuqala, kufanele kuphawulwe ukuthi kuncike nezindinganiso ezithile lapho ngokuqinile Kwenziwa HR Outsourcing, oda kubasebenzi ingalungiswa ngezimiso ezahlukene. Kodwa ngokuvamile lokhu encwadini yabo ethi encompasses Ochwepheshe loMkhandlu imisebenzi inkampani ezifana:
Ukusungula isinqumo isidingo sokuhlakulela ithuluzi elifanele;
ukuqoqa idatha ezidingekayo ukukhipha oda;
ukulungiswa umyalelo othize yephrojekthi, kusebentisana kwayo, wokubuyekeza uma kunesidingo;
okwenza ulwazi olufanele embhalweni bese ungena ke ngabantu abanolwazi;
ukujwayelaniswa nge oda yalabo abanhliziyo izikhundla kukhona endaweni ethile yesenzo zomthetho.
Ukulungiselela sesinqumo oda kushicilelwa
Umsebenzi kokuqala kungase kusetshenziswa ulwazi oluqukethwe amamemo, izinkomba naphakathi, izenzo. Ama-oda Domestic ngokuvamile esekelwe kunomthetho wendawo, kanye nohlu kungaba ngempela ebanzi. Imibhalo Okusalungiswa ku umbuzo, ngokuvamile enziwa nge iqhaza izikhulu eziphezulu kwabasebenzi amasevisi ibhizinisi. Nokho, umsebenzi wabo kungaba kwenziwe ngesisekelo izethulo ukuthi ezisayinwe izinhloko zeminyango ezihlukahlukene inkampani.
Njengesisekelo imibhalo efanele ingasetshenziswa amasampula kwabasebenzi oda, okungamazwe esetshenziswa inkampani. Into esemqoka ekubhekaneni inkinga umbuzo - ulihlola ngokucophelela etintfweni ukushicilelwa idokhumenti, ngesisekelo sokuthuthukiswa oda. Kubalulekile ukuthi amazwi okuyinto afakiwe idokhumenti olufanele ziyavumelana nemithetho lomthetho.
Iqoqo idatha processing oda
Umsebenzi esilandelayo inkampani ochwepheshe wemfanelo akha oda esithile isampula kubasebenzi - ukuqoqa ulwazi oludingekayo ukuze ukushicilelwa idokhumenti. Singasho amelelwe:
ezenzweni zomthetho esisemthethweni;
imibhalo zangaphakathi inkampani;
imithombo esikhishwe emizimbeni ephakeme, neminyango, okuyinto ibhizinisi inesibopho;
phambili ekukhulumeni kwabezindaba, izincwadi zesayensi.
Ukuthuthukiswa kwe-oda okusalungiswa
Uma lokhu kwaziswa sekuqoqiwe, ochwepheshe abanekhono ngqo ne-oda okusalungiswa kubasebenzi. Isixazululo sale nkinga, kudinga, okokuqala kunakho konke, kusakhiwo efanele idokhumenti. Kuyinto efiselekayo abonisa ukuthi isakhiwa iphrojekthi, oda isampula kubasebenzi, hhayi isenzo wendawo esemthethweni ngokomthetho. Lokho - ukubhala ephepheni igama elithi "project". Nokho, umbhalo umthombo kumelwe alethwe eduze ngangokunokwenzeka kulokho kumele khona oda olusemthethweni. Kungenzeka ukuthi inhloko afanele pre-vumela umbhalo idokhumenti ifomu yayo yasekuqaleni.
Uma oda - ngesimo, kokuqukethwe, bavumelana - kanye noma ishintshwe, ke ingathunyelwa isignesha. Iyini inqubo?
Ukubhalisela i-oda kanye ukudluliselwa kwabasebenzi bayo
Ngomqondo onabile, akusona inkinga - into esemqoka ukuthi umuntu esiqinisekisa idokhumenti kokugunyaza kangaka. Ngokuvamile, izimpawu Ama-oda ku-izisebenzi amabombo kule nkampani. Ukuze leli fomu idluliselwa okulungiselelwe ngokuphelele - intracorporate Universal noma ngolwazi ukuthi bangena kuyo ongoti wemfanelo. Ukusayinwa idokhumenti kusho inkomba izikhundla womuntu, ekuphatheni liqinile, Igama layo, Isibongo, futhi affixing amasignisha yabo.
Ngokuhambisana nemithetho asethwe ngaphakathi enkampanini Kwenziwa, uma kunesidingo, idokhumenti lokuhoxisa.
Ngemva ziqinisekiso lwekhanda idokhumenti yadluliselwa Umsebenzi, kumelwe sibukeze ke. Iqiniso lokuthi umuntu oye wafunda idokhumenti kungaqinisekiswa ngokuthola isignesha yakhe ukuze noma ingeze ifomu lokubhalisa.
Manje ukufunda indlela ukunakekela eyenziwa oda kubasebenzi. Umsebenzi oyinhloko, okuyinto ixazululwe ngokuthi izikhulu eziphezulu lenkampani ngesikhathi esifanayo - ukubhaliswa imibhalo embuzweni.
Ukubhalisa oda: ezicashile
Inqubo okukhulunywa kuhilela ukwenza ulwazi mayelana oda amarejista ekhethekile naphakathi. Kukholakala ukuthi isampula ethile evunywe izisebenzi ukuze sivumeleke kuphela ukubhalisa umthombo kule nkampani. Uma le nqubo akuyona kwenziwe maqondana idokhumenti, ngemiphumela kwezomthetho - abasebenzi kanye nokuphathwa inkampani ayenzeki.
Ukubhalisa oda kubasebenzi, njengoba sibonile ngenhla, kuyisici esibaluleke yokwenza le mibhalo. Inqubo efanele kuhilela isinqumo 3 imisebenzi:
Control phezu ukubulawa oda;
ukuhlinzeka ukufinyelela okusheshayo imibhalo.
Bhalisa ngokuqinile babe yonke imithombo ukuthi ihlukaniswa njengoba zokuphatha, indaba yokubala, izimali. Kuyongenwa ezincwadini kolwazi naphakathi-ezinkampani imiqulu zivela izinhlangano zama-third party. Ama-oda kubasebenzi, kanye nanoma yimuphi omunye umthombo ku ukubhalisa ukuthola inombolo ngabanye kanye indices kuphoqelelwe ngezigaba elilungile temitfombolwati.
Bhalisa kubasebenzi Amarekhodi unawo wonke amadokhumenti kukhona awusebenziseki, futhi ibuye isetshenziswe ezimali nezinhloso ukwazisa abasebenzi abanentshisekelo mayelana amaqiniso athile kwezomnotho. Ama-oda kubasebenzi, yebo, ziyasebenza emithonjeni efana.
Document inqubo yokubhalisa wenziwa isikhathi esingu-1 - ngokuqondile ngaphansi isiqondiso sabo shicilelo (njengoba kwaba njalo endabeni ka-oda okukhulunywa), noma ngenkathi ufaka kusukela ngaphandle tesifundvo. Uma umthombo ehamba esuka iyunithi elilodwa kwesakhiwo kwenye inkampani, bese inike Ukuyibhalisa akudingekile.
Kukhona 3 izindlela main kokubhaliswa imithombo esetshenziswa enhlanganweni ukuhamba komsebenzi.
Okokuqala, kungenxa imithi, sicabangela reflection enemininingwane ezincwadini ekhethekile yolwazi ngalokho isakhiwo futhi ngaziphi izinjongo ishicilelwe noma ukuthi i-oda kubasebenzi, isibonelo esenezelwe.
Okwesibili, akukho okungenziwa ngesakhiwo Imininingwane Ikhadi lokubhalisa mayelana nemithombo ezisetshenziswa kohlaka idokhumenti naphakathi-corporate. Kuyinto design amakhadi ukulawula imithombo futhi sihlanganise wabayisa wokufaka ekhethekile.
Okwesithathu, kukhona ukubhaliswa okuzenzakalelayo kwamadokhumenti. Kuhilela ukufaka ulwazi mayelana nemiyalo embuzweni neminye imithombo ibe yi-intracorporate registers ngokuzenzakalelayo - usebenzisa isofthiwe ekhethekile kanye nengqalasizinda edingekayo (isibonelo, amaphrinta, amaskena, ukuxhuma kwenethiwekhi).
Kukhona isenzo esijwayelekile, ngokusho ukuthi yimiphi imibhalo evamile okufanele ibhaliswe - I-oda le-Ministry of Culture of the Russian Federation No. 536, eyamukelwa ngoNovemba 8, 2005. Lo mthombo womthetho ubonisa ukuzindla kumarejista:
Igama lenkampani ekhishwe lokhu noma lelo dokhumenti - kulokhu, umyalelo kubasebenzi;
Usuku lokukhishwa kwedokhumenti, inombolo yalo yokubhalisa;
Isihloko nesifinyeto somqulu;
Ulwazi mayelana nokwenziwa komyalelo.
Ukungena kubhalisiwe kwenkampani yolwazi kumayelana nemiyalo ethile kungenziwa ngokusetshenziswa kwezinye izinqubo zokuhlelwa kwazo. Isibonelo, umnyango wakwa-HR ungahlukanisa imithombo efanele kulabo abahlobene ngqo nekhefu lomsebenzi, ukuhamba kwebhizinisi, ukukhuthaza. Ngokuvamile ama-oda amaningi enza ifomu lokusebenza lomqine, ngokugcwele kuyoba ukuhlukanisa ngezizinda ezihlukene ngaphakathi kokubhalisa.
Esinye isici esibalulekile sokugcina ama-oda ku-firm is isitoreji sabo. Ngenhla saphawula ukuthi ama-oda omsebenzi agcinwa kuye ngenhloso ethize yedokhumenti ngaphakathi kwesikhathi esithile. Ngakho-ke, amadokhumenti ahlukaniswe ngokuhambisana nesici esifanele kufanele afakwe ezindaweni ezahlukene.
Noma yikuphi ukuhlelwa kwabasebenzi (ifomu yayo) kumele kugcinwe ngokwehlukana kulezo zindawo ezihambisana nomsebenzi oyinhloko webhizinisi. Amadokhumenti abhalisiwe futhi afakwe kwisitoreji kufanele avezwe ngendlela yemvelaphi.
Ama-oda wezisebenzi avame ukuhlanganiswa zibe amacala ahlelwe ngamasethi ahlukahlukene. Kuyadingeka ukuthi ochwepheshe onokwethenjelwa wezinsizakalo zabasebenzi bafake amafayili, ukubala ngokunembile amashidi abekwe kulo, ukufakazela ngezincazelo ezidingekayo, ukwenza isembozo seqoqo lamadokhumenti elihambelanayo.
Yiziphi izinzuzo zamaphesheni asempesheni
Kuyini ukuvinjelwa kwemisebenzi yokubhalisa imoto: izizathu nezici
Amasampuli wezicelo. Ungabhala kanjani isikhalazo enkantolo?
Izinhlobo zokuphulwa kanye nokuzibophezela kokuphula umthetho webhajethi
Zendlala Yesinye adenoma: ukwelashwa kanye nezimpawu
Kwezinye izimo, isikhalazo mayelana Ukungenzi lutho umsizi wesikhonzi senkantolo?
Imisebenzi kaTurgenev - umsebenzi walomculi
Ukudla okuhlukile: ukubuyekezwa mayelana nomqondo we-dietetic
Okusha, Shcherbinka: Izibuyekezo
Indlela yokuhalalisela umngane ngosuku lwakhe lokuzalwa: indawo evulekile yokucabanga
Ikhekhe "Cinderella": iresiphi ngokuvumelana GOST nezeluleko eziwusizo
Umuthi 'papaverine "(isibhamu)
Skydiving e eYekaterinburg - yokuzilibazisa omkhulu kulolu kakhulu